I-chalcedony yamagilebhisi - Isibuyekezo esisha se-2021- ividiyo
I-agate yamagilebhisi noma i-purple botryoidal chalcedony crystal.
Thenga i-agate yemvelo yamagilebhisi esitolo sethu
I-agate yamagilebhisi igama lokuhweba, empeleni la yi-chalcedony ye-botryoidal. I-Botryoidal isho ukuthi amakristalu amancane amancane ayindilinga abumbeke ngokwendalo.
Amagilebhisi agate avela e-Indonesia
I-agate yamagilebhisi - I-Botryoidal purple chalcedony quartz
Amagilebhisi e-crystal agate crystal meaning and izakhiwo zokuphilisa izinzuzo
I-agate yamagilebhisi ngaphansi kwesibonakhulu
Yini i-agate yamagilebhisi elungele yona?
Yini i-amethyst yamagilebhisi?
Ukuthungwa kwe-botryoidal noma umkhuba wamaminerali kungenye lapho amaminerali enefomu le-globular yangaphandle efana nenqwaba yamagilebhisi.Leli ifomu elijwayelekile lamaminerali amaningi, ikakhulukazi i-hematite, isimo esaziwa njengesijwayelekile. Futhi kuyindlela ejwayelekile ye-goethite, smithsonite, fluorite kanye ne-malachite.
Lokhu kufaka phakathi i-chrysocolla. Umkhakha noma umvini ngamunye kumaminerali we-botryoidal mncane kunowamaminerali e-reniform, futhi mncane kakhulu kunowamaminerali we-mamillary. Amaminerali e-Botryoidal akha lapho ama-nuclei amaningi aseduze, izinhlayiya zesihlabathi, uthuli, noma ezinye izinhlayiya, zikhona.
Amakristalu acicular noma anemicu akhula ngokuzungeze azungeze i-nuclei ngesilinganiso esifanayo, avele njengemikhakha. Ekugcineni, le mikhakha ihlangana noma ihlangana naleyo eseduze. Le mikhakha eseduze bese ihlanganiswa ndawonye ukuze yakhe umabhebhana iqoqo.
I-Chalcedony iyindlela ye-silica ye-cryptocrystalline, enezinhlaka ezinhle kakhulu ze-quartz ne-moganite. Lawa womabili amaminerali e-silica, kepha ahlukile kuleyo quartz enesakhiwo se-trigonal crystal, kanti i-moganite i-monoclinic. Isakhiwo samakhemikhali esijwayelekile yiSiO₂.
I-Chalcedony ine-luster waxy, futhi ingaba yesikhashana noma iguquguquke. Ingakwazi ukuthatha imibala ehlukahlukene, kepha leyo ebonakalayo imhlophe imhlophe, iluhlaza okwesibhakabhaka noma umthunzi onsundu kusukela kulubala kuze kube mnyama. Umbala we-chalcedony uthengiswa ngokuhweba uvame ukuthuthukiswa ngokugaya noma ukushisa.
Itshe likhuthaza ukuzinza kwangaphakathi, ukuzola, nokuvuthwa. Izakhiwo zayo ezifudumele nezivikelayo zikhuthaza ukuphepha nokuzethemba. Ivumela amazinga ajulile futhi ajulile okuzindla esikhathini esifushane. Leli tshe eliyigugu liyikristalu lamaphupho, umuzwa, nokunethezeka.
I-Botryoidal chalcedony iyitshe elinokuthula nelincane. Ikhuthaza ukuzinza kwangaphakathi, ukuzola, nokuvuthwa. Kuyizinto ezifudumele, ezivikelayo ezikhuthaza ukuphepha nokuzethemba. Ivumela amazinga ajulile futhi ajulile okuzindla esikhathini esifushane.
Eyakhelwe e-Indonesia ngenqubo yokuqhuma kwentaba-mlilo, i-agate yamagilebhisi uhlobo lwe-botryoidal amethyst oluza ngoku nsomi. Zihluka ngombala kusuka ekukhanyeni, cishe ikristalu elimhlophe kuye kobubende obumnyama. Esinye isampula esingavamile naso sinombala oluhlaza okwesibhakabhaka kuzo.
I-agate yemvelo yamagilebhisi iyathengiswa esitolo sethu segem
Amagilebhisi agate 5.688 g
Amagilebhisi agate 3.452 g
Amagilebhisi agate 9.584 g